Francois Hollande oo maanta loo dhaarinayo madaxtinimada Faransiiska – Radio Daljir
Francois Hollande oo maanta loo dhaarinayo madaxtinimada Faransiiska
Paris, May 15 – Francois Hollande madaxwaynha cusub ee Faransiiska ayaa maanta oo Talaado ah loo dhaarinaya madaxweynaha Faransiiska ,waxaana xafaladda caleemasaarku ay ka dhacaysaa qasriga dalkaasi looga arrimiyo ee Elysee,iyadoo munaasabbadda uu ka soo qaybgeli doono madaxweynaha xafiiska ka degaya ee Nicolas Sarkozy.
Marka uu la wareego madaxtinimada Faransiiska ayaa lagu wadaa in Mr Hollande uu lugaha la galo loolan adag oo ku aadan dhinaca mashaqada deymaha ee ka taagan suuqa dalalka isticmaala lacagata Euro ee loo yaqaan aaggga Euro.
Saacado uun kaddib marka loo dhaariyo xafiiska madaxtinimada ee dalkaasi Faransiiska ayaa lagu wadaa in Madaxweynaha Faransiiska Mr Hollande uu u duulo dalka Germany si wadahadal ula yeesho hogaamiyaha dalkaasi Germany haweeneyda Angela Merkel.
Safarka uu madaxweynaha Faransiisku ku tegayo dalkaasi Germany ayaa muujinaya muhiimadda xidhiidhka labada dal xilli qaaradda Europe ay ku jirto marxalad xasaasi ah.
Marka loo dhaariyo madaxtinimada Faransiiska ayuu Mr Hollande magacaabayaa golihiisa wasiirdda ,waxaana lagu wadaa in uu ninka khibradda leh ee qunyar socodka ah ee Michel Sapin, u magcaabo wasiirka maaliyadda ,iyadoo sidoo kale loo badinayo in in uu xilka reysalwasaaraha u magcaabo ninka afka Germany ku hadla ee Jean-Marc Ayrault.
Maalinta Khamiista ah ee soo socota ayuu madaxweyne Hollande markii ugu horreysay shir la yeelanayaa golhiisa wasiiradda,iyadoo Arbacaddana uu tegi doono magaalada Washington si uu halkaasi ugula kulmo dhigiisa Maraykanka Barack Obama.